LGBTQ + - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Kheyraadka Xubinta > LGBTQ +
Wax ka baro daryeelka caafimaadka maskaxda, qalliinka xaqiijinaya jinsiga, iyo adeegyada bulshada ee loogu talagalay xubnaha CHPW's LGBTQ +.
LGBTQ + caafimaadka
Waxaad u qalantaa qorshe daaweynaya caafimaadkaaga oo dhan. Taasi waxay kujirtaa qayb kasta oo idinka kamid ah — shucuur ahaan, muuqaal ahaan, iyo maskax ahaanba - oo aadna laqabsataan bulshooyinka aad ka tihiin
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee caymiska Washington (CHPW) waxaa ku jira faa'iidooyin dhowr ah oo loogu talagalay bulshada LGBTQ +.
Adeegyada caafimaadka ee xaqiijinaya jinsiga
Xubin ahaan CHPW, baahiyahaaga daryeel-jinsi-xaqiijinaya ayaa daboolaya.
CHPW waxay dabooshaa daaweynta hoormoonka iyo adeegyada caafimaadka maskaxda ee laxiriira kala guurka jinsiga, oo sidoo kale loo yaqaan "dib u habeynta jinsiga" ama "xaqiijinta jinsiga" eraybixinta caafimaadka.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan adeegyadan, kala hadal dhakhtarkaaga. Sidoo kale waad awoodaa nala soo xiriir emayl ama taleefan si aad wax badan uga ogaato.
Qalliinka xaqiijinaya jinsiga
Qalliinka xaqiijinaya jinsiga ayaa loo daboolay xubnaha CHPW iyada oo loo marayo Maamulka Daryeelka Caafimaadka (HCA).
Adeegyada qalliinka badankood waxaa lagu dabooli doonaa khidmad-lacag-bixin ah, oo aad u garan karto inay tahay ProviderOne. Adeegyada waxaa bixin kara bixiye kasta oo aqbala Apple Health (Medicaid), iyada oo oggolaansho hore laga helayo HCA.
Adeegyada caafimaadka transgender-ka ee lagu bixiyo HCA way ku jiri karaan, laakiin kuma koobna kuwa soo socda:
Qalliinka naasaha / laabta
Qalliinka xubinta taranka
Qalliinno kale oo ay ku jiraan qalliin cod ah
Waxbadan ka baro barnaamijka caafimaadka transgender ee HCA
Adeegyada caafimaadka maskaxda iyo dhaqanka
Nasiib darro, xubnaha bulshada Washington ee LGBTQ + wali waxay la kulmaan eex iyo go'doomin, taas oo saameyn xun ku yeelan karta caafimaadka maskaxda, shucuurta, iyo dhaqanka.
Xubnaha CHPW waxay marin u leeyihiin adeegyo caafimaad oo kala duwan oo ay ka mid yihiin:
La talin shaqsi ama kooxeed
Daaweynta bukaan-jiifka iyo bukaan-socodka
24/7 Khadka Talo-bixinta Kalkaalisada
Booqo Xarunteena Kheyraadka Caafimaadka Habdhaqan si aad waxbadan uga ogaato adeegyada caymiska
Adeegyada ku saleysan bulshada
Badanaa, waxyaabaha isbedelka ugu weyn ku sameeya caafimaadkaaga waxay ka dhacaan meel ka baxsan xafiiska dhakhtarka. CHPW waa Barnaamijyada Bulshada iyo Maareynta Kiiska kaa caawin kara inaad kugula xiriiraan ilaha deegaanka ee cuntada, hoyga, iyo tababarka shaqada.
Maareeyayaasha Kiiskeennu waxay bixiyaan taageero shaqsiyeed si ay kaaga caawiyaan inaad la kulanto yoolalkaaga caafimaad. Waxay kaa caawin karaan jadwalka ballamaha dhakhtarka, buuxinta waraaqaha (tusaale ahaan: naafonimada), codsiyada shaqooyinka, iyo waxyaabo kale oo badan. Haddii aad su'aalo qabtid, fadlan la xiriir kooxdayada Maareynta Kiiska Gaarka ah 1-866-418-7004.
Waxbadan ka baro Maareynta Kiiska ee loo yaqaan 'CHPW'